Alshabaab oo ku hanjabtay inay dagaal ku qaadayso danaha Itoobiya | Berberanews.com
Home WARARKA Alshabaab oo ku hanjabtay inay dagaal ku qaadayso danaha Itoobiya
Alshabaab oo ku hanjabtay inay dagaal ku qaadayso danaha Itoobiya
Muqdisho(Berberanews)- Al-shabaab oo markii ugu horreysay ka hadashay heshiiskii ay dhawaan wada gaadheen hogaamiyayaasha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga Dekedaha, ayaa sheegtay in ay ka hortagi doonaan wax ay ku tilmaameen sida ay hadalka u dhigeen damaca Itoobiya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in heshiiska dekedaha lagu siiyay Itoobiya iyo hadalkii ka soo yeedhay Abiy Ahmed ee ahaa in Soomaaliya iyo Itoobiya la mideyn doono uu yahay qorshe deggan oo ay qasab tahay in hoggaamiyeyaasha Itoobiya ay hirgeliyaan xoog ama xeelad midey doonaan haku keenaan.
Waxaa uu sheegay in Itoobiya ay in muddo si hoose ugu howlaneyd qorshaha la wareegitaanka Dekedaha, isla markaana ay jirto waddo laga soo bixiyay gudaha Itoobiya, lana doonayo in la soo geliyo Dekeda Hobyo oo uu xusay inay ka mid tahay dekedaha lagu wareejiyay Itoobiya, balse ay Mujaadihiinta ka hortageen oo lagu joojiyay nawaaxiga Caabud-Waaq, sida uu yidhi.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in haddii aysan dadka Soomaaliyeed baraarugin Caasimadda Itoobiya laga dhigi doono Muqdisho, sida caasimadda Yuhuudda looga dhigay Qudus, waxaana uu tilmaamay in aanay marnaba aqbali doonin in qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya lagu wareejiyo Itoobiya.
Previous articleDalladda Ururrada aan Dawliga ahayn ee Somaliland SONSAF oo hoggaan cusub doortay
Next articleImaaraadka oo sheegay inuu ka shaqaynta horumarinta Djibouti iyo Somaliland uu geeska Afrika kaga kasbaday Ixtiraam